အခမဲ့ DOWNLOAD D3DX9_38.DLL - DLL - 2019
ယနေ့အပေါ် DirectX ကိုအစိတ်အပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်များအကြားအပြန်အလှန်များအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးမူဘောင်ဖြစ်ပါတယ်နှင့်ဂိမ်းများအတွက်ဂရပ်ဖစ် rendering ။ အဆိုပါအစိတ်အပိုင်း၏စာကြည့်တိုက်များနှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသည့်အခါထိုကွောငျ့, မလွှဲမရှောင်ဂိမ်းက start ၏အချိန်မှာများသောအားဖြင့်, အမှားများကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါတိုက်ရိုက် X ကိုဗားရှင်းအစိတ်အပိုင်း9အမှား 2000 ခုနှစ်ကတည်းကအများဆုံးက Windows ဗားရှင်းပေါ် - ဤတပျက်ကွက် d3dx9_38.dll ဖြစ်ပါတယ်။
အမှားအယွင်းများ၏အမြစ်အကြောင်းမရှိကတည်းက - စာကြည့်တိုက်၏ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်မရှိခြင်း, အရိုးရှင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုကို install ဖို့ဖြစ်ပါတယ် (reinstall) DirectX ကို၏နောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်း: ပျောက်ဆုံးနေတဲ့စာကြည့်တိုက်၏ installation ကာလအတွင်းယင်း၏အရပျ၌ကို install ပါလိမ့်မည်။ ဒုတိယ option ကိုပထမမရရှိနိုင်လျှင် - လက်စွဲစာအုပ် file system ကို directory ကို; ပထမဦးဆုံး option ကိုမရရှိနိုင်သောအခါသက်ဆိုင်သည်။
Method ကို 1: DLL-Files.com လိုင်း
ရှာဖွေရေးဘား d3dx9_38.dll အတွက်အစီအစဉ်နှင့် type ကို run လိုက်ပါ။
သင်တစ်ဦးစာကြည့်တိုက်ကို select ဖို့လိုအပ်ရှိမရှိ Check, ထို့နောက်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Install".
အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်၏အဆုံးမှာ PC ကို restart ချလိုက်ပါ။ အဆိုပါပြဿနာမရှိတော့သငျသညျနှောငျ့ယှကျပါလိမ့်မယ်။
Method ကို 2: DirectX ကို Install
d3dx9_38.dll စာကြည့်တိုက် - တိုက်ရိုက် X တို့မှာ၏မူဘောင်၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်း installation ကိုစဉ်အတွင်းကကျရှုံးခြင်း၏အမြစ်အကြောင်းမရှိဖယ်ရှားခြင်း, လက်ျာအရပ်ဌာန၌သို့မဟုတ်သင့်ပျက်စီးမိတ္တူကိုအစားထိုးဖြစ်စေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဒေါင်းလုပ် DirectX ကို
ဝဘ် installer ကိုဖွင့်ပါ။ ပထမဦးဆုံး window ထဲတွင်သင်လိုင်စင်သဘောတူညီချက်လက်ခံ click နှိပ်ဖို့လိုအပ် "Next ကို".
နောက်တစ်နေ့အမှတ် - နောက်ထပ်အစိတ်အပိုင်းများရွေးချယ်မှု။
သင်ကလိုအပ်ရှိမရှိကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်နဲ့အပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဆက်လက် "Next ကို".
လိုအပ်သောအရင်းအမြစ်များကိုဒေါင်းလုပ်၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ဖို့နဲ့စနစ်သို့သူတို့ကိုငါ install လုပ်ပါ။ ယင်း၏ပြီးစီး, စာနယ်ဇင်းအပေါ်သို့ "ပြီးပြီ" ပြီးခဲ့သည့်ပြတင်းပေါက်၌တည်၏။
ငါတို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကို restart ပြန်လုပ်ဖို့အကြံပြုပါသည်။
Method ကို 3: Windows ကိုစနစ်က directory ထဲတွင်အဆိုပါ d3dx9_38.dll ချိန်ညှိခြင်း
အချို့ကိစ္စများတွင်အခွင့်အရေးအတွက်ကြောင့်အခက်အခဲတိုက်ရိုက် X ကိုသို့မဟုတ်အသုံးမပြုနိုင်သည့်တပ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းစနစ်ပေါ်လာပါဘူး, နှင့်အမှားအသုံးပြုသူနှောင့်အယှက်ဆက်လက်ဆိုပါတယ်သောကြောင့်, ပြည့်စုံသည်မဟုတ်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်အညစ်နှငျ့ရငျဆိုငျ, လွတ်လပ်စွာကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ပျောက်ဆုံးပြောင်းလဲနေသော link ကိုစာကြည့်တိုက်ကို download လုပ်ပါ, အဲဒီနောက်ထိုအလမ်းညွှန်တစ်ဦးအတွက်ကြောင့်ရွှေ့သို့မဟုတ်ကူးယူသငျ့သညျ:
ကို C: Windows SysWOW64
အတိအကျရှိရာ Windows ဗားရှင်းရန်သင့်စာကြည့်တိုက်ကိုရွှေ့ဖို့အထဲကရှာတွေ့ခြင်းငှါ, ညွှန်ကြားချက်လက်စွဲတပ်ဆင်ခ DLL ကိုဖတ်ပါ။
ဒါဟာအစအထက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းထိရောက်မှုဖြစ်သည့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သမျှဇာတ်လမ်းဖြစ်ပါသည်: DLL-file ကိုပစ်ချနှင့်ထိုပြဿနာရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာသင်ဒါ့အပြင် registry ကိုအတွက်စာကြည့်တိုက်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့လိုအပ်ဆိုလိုသည်။ အဆိုပါကိုင်တွယ်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်, စိတ်မပူပါနဲ့, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့ကိုင်လုံးဝအမှားများကိုဖယ်ရှားပေးမထားပါနဲ့။
ဗီဒီယို Watch: Tutorial : Como solucionar el error falta en Juegos (စက်တင်ဘာလ 2019).